वडा अध्यक्ष बन्न रेडियोबाट राजिनामा ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > वडा अध्यक्ष बन्न रेडियोबाट राजिनामा !
तुलसीपुर । पत्रकार संगित बस्यालले सक्रिय पत्रकारीताबाट विश्राम लिएको घोषणा गरेका छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालीका वडा नं. ९ मा वडा अध्यक्षका उमेदवार बस्यालले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
बस्यालले रिपोटर्श क्लव दाङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर रेडियो प्रकृतीको स्टेशन म्यानेजर, पत्रकार महासंघको सदस्य र प्रेस क्लव अफ दाङको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । अहिले अवकास पछि राजतिनि गर्ने परिपाटि बढेकाले त्यसलाई चिर्नका लागी आफु सक्रिय जिवनमै राजनितिमा लागेको बताए ।
रिपोटर्श क्लव दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बस्यालले आफ्नो १० वर्षे पत्रकारीता यात्रालाई स्थगित गर्दै बस्यालले राजनिति विना कुनै कुरा अघि बढ्न नसक्ने बताए । अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यावसायिक पत्रकारहरुले नै अव्यवसायीक गतिबिधिहरु गरिरहेकोले यसले आफुलाई दुःखी बनाएको उनले बताए ।
पत्रकारीताको अवस्था र दुःखबाट आफु चिरपरिचित रहेको बताउदै बस्यालले सदैव पत्रकारहरुको हक हितको पक्षमा लाग्ने घोषणा गरे । अबको २० वर्ष राजनितिमै बिताउने घोषणा गरेका बस्यालले आफु सक्रिय रुपमा नभए पनि कुनै न कुनै माध्यममा पत्रकारीतामा संलग्न रहने जानकारी दिए । चुनाव जिते पनि हारे पनि आफु पार्टिको राजनितिक कार्यकर्ता भएर समाज परिवर्तनमा लाग्ने उनले बताए ।
पत्रकारीतालाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको उनको भनाई थियो । साथै उनाँले वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएमा तुलसीपुरमा रहेका सम्पुर्ण सञ्चार माध्यमहरुलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालीका वडा नं. मा रहेको नगर विकास क्षेत्रमा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ ११
२०७४ जेष्ठ ११ गते १७:३१ मा प्रकाशित
थपिएका तहमा निर्वाचन गर्न नसकिने आयोगको ठहर, दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्योल !
मदिरा बिक्रीमा भारी गिरावट, अन्तः शुल्क २१% घट्यो
चितवनलाई औद्योगिक नगरी बनाउने त प्रधानमन्त्री ज्यू ?
बाँदरको शोकमा पुरै गाउँले गरे कपाल मुण्डन, स्कुल पनि बिदा